China OTOPYYK TOPCP20-20D N'èzí Ọmarịcha Ọkụ na-azọpụta ọkụ Mwube ihuenyo ụlọ nrụpụta na ụlọ nrụpụta | EYELED
Ire ire ere
Ofu ngosi LED
Ngosipụta LED mgbazinye
Curtian ada ngosi
Ngosipụta ngosi doro anya
Digital Visual Ikanam Ngosipụta
Ike Ichekwa Ikanam Ngosipụta
Ihuenyo Ngosipụta Creative Creative
Ngosipụta Smart Business LED
Obere ngosi Pixel Pitch LED
OTOPYYK TOPCP20-20D Ihuenyo mmanya mmanya na-echekwa ike dị n'èzí
1. Ikanam ihuenyo mmanya ọkụ. Ọdịdị bụ ụdị oghere na usoro ụgbụ, ụlọ ọrụ ahụ na -akpọkwa ya ihuenyo enyo, ihuenyo oghere,
2. Ime ka ọrụ ngosipụta na -agbanwe agbanwe ma nwekwuo obi ike na nhọrọ n'ihi ihuenyo grid
3.High agbakwunyere ogwe ọkụ ọkụ, nkwụsi ike ngwaahịa dị elu.
A na -anabata atụmatụ elektrọnik pụrụ iche iji belata ọnụ ọgụgụ nke ibe ọkụ.
Ibe ọkụ ọkụ 16 ọ bụla na -ekerịta otu ike na plọg mgbaàmà. N'okpuru otu ọnọdụ ahụ, ohere nke nkwụnye adịghị mma na-ebelata 94%.
4. Nhazi agbakwunyere nke kabinet nchịkwa na nhazi nrụnye.
Ogwe njikwa abụghị naanị akụkụ nke ihuenyo ahụ, kamakwa akụkụ nke ihe owuwu ahụ. A na-eme ka usoro ihuenyo dị mfe nke ukwuu, enweghị nkwụnye ma ọ bụ njikọ nwere ike ịhụ n'ọdịdị ihuenyo ahụ. Ọ bụghị naanị mara mma, kamakwa ọ na -eme ka nkwụsi ike dị ukwuu.
5. Sistemụ jụrụ oyi dị mma, ọ dịghị mkpa ịwụnye ikuku oyi maka ịjụ oyi. A na -eji alloy aluminom mee ihe ọ bụla ọkụ ọkụ LED ọ bụla, nke na -achagharị gburugburu, ka ọ nwee ike nweta ịdị mma nke onwe ya. N'otu oge ahụ, ike, njikwa, wdg dịpụrụ adịpụ site na ihe ndị na-enwu ọkụ, yabụ na ọ dịghị mkpa iwu usoro jụrụ oyi pụrụ iche dị ka ihuenyo ọkụ ọdịnala LED.
Nkọwa nke Pixel
Kwụ 20 kwụ ọtọ 20
Pịnye kabinet otu
Mkpebi kabinet otu
Ibu otu kabinet
Isi ntụ ntụ
Kwụ ≥110 Celsius vetikal ≥60 Celsius
Ebe nlele kacha mma
Static agbanwe agbanwe
Voltage isi ike
convection nke ihe okike na-akwalite
IP67 n'akụkụ abụọ
Okpomọkụ na -arụ ọrụ / nchekwa
Nwụnye ụba ihe
2.0mm mpempe akwụkwọ nchara galvanized oyi na-atụ
ngwa nwụnye Ngwaọrụ na-akwụghị ụgwọ
Nọgide na -agba ọsọ
Nọgide na -enwe ọnọdụ
N'ihu ihu ma ọ bụ Azụ
A na-ejikarị ihuenyo grid maka mgbidi ụlọ, mgbidi ákwà mgbochi iko, elu ụlọ, yana egbe mgbochi ikuku, igwe mbuli elu na ihe nkiri ndị ọzọ. wdg
Enwere ike itinye nrụnye na ndozi ngwa ngwa site na otu onye n'ime sekọnd iri kwa mita mita, ugboro 60 ngwa ngwa karịa ịwụnye ihuenyo ihu LED n'ihu, n'ihi na ọ bụ usoro nwere ikike, ọ na -ewe naanị nkeji 3 kwa squaremeter iji dobe ya.
AKỤKỌ dị elu
Ma ị na -ekiri site na adistance ma ọ bụ nso. ị nwere ike sie ihe dị na ihuenyo nke ọma.
Nkezi ike oriri nke ngwaahịa anyị bụ naanị 220, nke dị ọnụ karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ
NDỤ ọrụ ogologo oge
Nmepụta ikuku zuru oke, mkpocha ọkụ ọkụ, iji merie ihu ihu ihuenyo ọdịnala, nnukwu oghere emechiri emepụtaghị ike ikpo ọkụ, sistemụ ahụ kwụsie ike
Easyto na ụlọ ahịa
Windo, mgbidi ákwà mgbochi mgbidi, mmanya, akpaaka show, ntụrụndụ, ámá egwuregwu, hotel, mgbazinye agbamakwụkwọ, ogbo, ngosi nka, ngosi, ahịa centerhopping nnukwu ụlọ ahịa, sinima, wdg
na -eburu igbe osisi na mbupu aluminom na -ebugharị n'oké osimiri, ikuku, ụgbọ okporo ígwè
Ọ na-abụkarị ndị ahịa, ọ bụkwa ihe kacha anyị mkpa bụ na ọ bụghị naanị otu n'ime ndị na-ahụ maka ọrụ, ntụkwasị obi na ịkwụwa aka ọtọ, kamakwa ọ bụ onye mmekọ maka ndị ahịa anyị maka ọnụahịa asọmpi maka Ngosipụta ime ụlọ na-apụ apụ (P15.63/P12.5/P10). .42/P8.93/P6.25/P5.21mm), Anyị nwere ndị ọrụ aka ọrụ maka azụmaahịa mba ofesi. Anyị ga -edozi nsogbu ị ga -enwe afọ ojuju. Anyị ga -ewetara ngwaahịa ị chọrọ. Jide n'aka na ị nweere onwe gị n'ezie ịkpọ anyị.
Ọnụ ego asọmpi maka mgbidi vidiyo CED sitere na China, ihuenyo LED, na mgbakwunye na enwekwara mmepụta ọkachamara na njikwa, akụrụngwa mmepụta dị elu iji mesie ịdị mma na oge nnyefe anyị, ụlọ ọrụ anyị na-agbaso ụkpụrụ nke ezi okwukwe, ịdị elu na arụmọrụ dị elu. Anyị na-ekwe nkwa na ụlọ ọrụ anyị ga-anwa ike anyị niile iji belata ọnụ ahịa ndị ahịa, belata oge ịzụrụ ihe, ịdị mma ngwaahịa dị mma, nwekwuo afọ ojuju ndị ahịa wee nweta ọnọdụ mmeri.
EYELED Ìhè LIMITED
bụ onye na-emepụta ihe dị elu LED Ngosipụta Ngwọta ike ịchekwa ike dị na Hongkong na Shenzhen (aha ụlọ ọrụ ọzọ dị n'ime) na China, anyị nwere ikike nrụpụta kwa ọnwa nke mita 20,000 nke akwụkwọ ntuziaka. Ejiri ahịrị mkpokọta akpaaka dị elu na ahịrị ihicha ihe, anyị emeela ka Ngosipụta LED gaa ebe niile n'ụwa na ọnụ ahịa emere na china na ezigbo ntụkwasị obi.
A na -eji ngwaahịa anyị eme ihe na mgbasa ozi mgbasa ozi n'èzí. ihe omume ọdịbendị na ihe ntụrụndụ stadọ, ụlọ oriri na ọ, ụ, ụ, mgbazinye agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ LED na-ekesa ihe ịchọ mma, wdg, yana uru usoro nke ihuenyo ngosi agba zuru oke, site na imewe, nrụnye nrụnye na ndozi. ojiji nke usoro ụzọ agbakwunyere agbazinye iji belata ndị na-azụ ahịa na-akwụ ụgwọ nke ọma ma nye ndị ahịa ọrụ kachasị.
Ejikwala EYELED LIGHITING LIMITED iji wuo imewe, usoro nrụpụta, ụkpụrụ ihe; iji guzobe usoro nkwado na usoro mmejuputa ngalaba site na ijikọ ndị mmadụ, atụmatụ, ahịa: arụmọrụ dị iche iche iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa dị iche iche n'ahịa dị iche iche: EYELED ezinụlọ na-achụso onwe ha iji dozie nsogbu ndị ahịa. onye ahịa maka ogologo oge.
Ndị otu ọrụ anyị siri ike, zụrụ azụ, nwere ọrụ nyere ọrụ ịre ahịa usoro niile. Tupu ịre ahịa, anyị na -enye atụmatụ teknụzụ ngwaahịa zuru ezu Insale, anyị na -eduzi ma na -azụ ndị ahịa anyị nrụnye ihuenyo; mgbe irechara, anyị na -eji nlezianya nye ọrụ ikike maka mmejọ.
Ọnọdụ anyị na Shenzhen na -ekwe gị nkwa ngwa ngwa yana ngwa ahịa dị ọnụ ahịa maka ebe ị na -aga: Byair, ụgbọ oloko, n'oké osimiri dị. EYELEDDisplay dị njikere ịbụ onye mmekọ LED a pụrụ ịdabere na ya maka ịga nke ọma n'ịzụ ahịa.
Ọnụ ahịa dị ala
Ọkachamara na ntụkwasị obi
Q1. Enwere m ike ịtụ ihe ngosi Ikanam nlele?
A: Ee, anyị na -anabata gị ka ị nye iwu nlele maka nnwale na nyocha dị mma. A na -anabata ihe atụ agwakọta.
Q2. Enwere oke ọnụ ọgụgụ ka ukwuu maka ngosipụtaA
Q3: Otu esi eme ihe banyere ọdịda?
A: Nke mbụ, a na -emepụta ngwaahịa anyị n'okpuru sistemụ njikwa njikwa siri ike, yana ọnụego ntụpọ nke lesshan 0. 2%. Nke abuo, n'oge oge akwụkwọ ikike, anyị na -amata ọkụ ọhụrụ maka iwu ọhụrụ na obere ọnụọgụ adịghị mma, anyị ga -arụzi ya ma zighachitere gị ya, ma ọ bụ anyị nwere ike kpaa nkata, gụnyere oku akpọrọ dabere na ọnọdụ ahụ n'ezie.
Q4: Ị na -enye akwụkwọ ikike ngwaahịa?
A: Ee, anyị na-enye akwụkwọ ikike afọ atọ.
Q5. Olee otú ịtụ Ikanam ngosi?
A: Nke mbụ, mee ka anyị mara ihe ịchọrọ ma ọ bụ ngwa gị, nke abụọ, anyị na -ehota dị ka arịrịọ gị si dị. Nke atọ, onye ahịa na -akwado nlele ahụ wee tinye usoro iwu. Nke anọ, anyị na -ahazi mmepụta
Nke gara aga: OTOPYYK TOPCP16-33D nwụnye HD Ngosipụta mmiri na-egbochi mmiri
Osote: OTOPYYK TOPCP25-25D Ihuenyo oghere oghere oghere
OTOPYYK TOPCP15-15Ozi Mgbasa Ozi Ọhụrụ nke Mgbasa Ozi ...
OTOPYYK TOPCP16-33D nwụnye HD Waterproofi ...
Piel p7.8 p15.625 p25 p31.25 p50 n'èzí ...
OTOPYYK TOPCP31-31D Agba zuru oke HD High Vesoluti ...
OTOPYYK TOPCP25-25D Ihuenyo oghere oghere oghere
OTOPYYK TOPCP15-15D ahaziri Ultra-mkpa Smart ...
Adreesị: Ime ụlọ 1401, Owuwu A, Jiansheng Building, Shenzhen, Guangdong, China